နာမည်ရ မုန်တိုင်း WUTIP – 20W စက်တင်ဘာလကုန်ရက် ဗီယက်နန်ကမ်းခြေသို့ဝင်မည် « MMWeather Information BLOG
« မုန်တိုင်း WUTIP ယနေ့ညနေပိုင်း၌ အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာမည် INVEST-93W လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 20W ဖြစ်လာပြီ »
နာမည်ရ မုန်တိုင်း WUTIP – 20W စက်တင်ဘာလကုန်ရက် ဗီယက်နန်ကမ်းခြေသို့ဝင်မည်
By mmweather.ygn, on September 27th, 2013
27 Sep 2013 1200Z
Location: 17.0 115.3
နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ မုန်တိုင်း WUTIP သည် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဒါနန်မြို့ အရှေ့ဘက် ၄၇၅ မိုင်ခန့်၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် ၄၁ဝ မိုင်ခန့်၊ တရုတ်ပြည်မ-ဟောင်ကောင်မြို့ တောင်ဘက် ၃၇၅ မိုင်ခန့်အကွာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း အနောက်ဘက်(Heading 274.38 degrees)သို့ တစ်နာရီ ၁၂ မိုင်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပါသည်။
မုန်တိုင်း WUPTIP သည် စက်တင်ဘာလ ၃ဝ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈း၃ဝ နာရီမတိုင်မီ ဗီယက်နန်နိုင်ငံကမ်းခြေအား၊ Quang Tri မြို့ မြောက်ဘက် ၁၈ မိုင်ခန့်မှ ဖြတ်ကျော်၍ ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်စဉ် မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လေတိုက်နှုန်း 65 knots(တစ်နာရီ ၇၅ မိုင်နှုန်းခန့်)ဖြင့် ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ လက်ရှိအချိန်၌ မုန်တိုင်းအရွယ်အစား အချင်း ကီလိုမီတာ ၅၅၅(၃၄၅ မိုင်ခန့်)ရှိနေပြီး၊ ဗဟိုတွင် မုန်တိုင်း ဒီလှိုင်းအမြင့် ၁၁ ပေ၊ မိုးရွာသွန်းနှုန်း ၂၅ဝ မီလီမီတာနှင့် အထက်(၉.၈၅ လက်မခန့်)ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။(ပုံ-၁)
TSR မှ ခန့်မှန်းချက်အရ မုန်တိုင်း ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီးချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းဒေသများအထိ ရောက်ရှိနိုင်မည့် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေလျော့နည်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။(ပုံ-၂)
မုန်တိုင်းသည် လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းတွင် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိပြီး ဗီယက်နန်ကမ်းခြေကို အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ဖြင့် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
SATURDAY AFTERNOON: Intensifies further asaTS as it moves across the central part of the South China Sea…about 700 km west-northwest of Dagupan City, Pangasinan [5PM SEP 28: 16.9N 114.2E @ 85kph].
SUNDAY AFTERNOON: Intensifies intoaTyphoon (Category 1) as it turns slightly west-southwest then back to west slowly across the South China Sea…about 475 km east-northeast of Da Nang, Vietnam [5PM SEP 29: 16.8N 112.6E @ 120kph].
(ပုံ-၁) နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ ပုံဖေါ်ထားသော မုန်တိုင်း WUTIP ၏ လမ်းကြောင်းခန့်မှန်းချက်နှင့် စက်တင်ဘာလ ၃ဝ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီအတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု ခန့်မှန်းပုံ ဖြစ်ပါသည်။
(ပုံ-၂) TSR မှ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခံရမှု ဖြစ်နိုင်ခြေပြပုံ(အောက်တိုဘာလ ၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈း၃ဝ နာရီ)
Uncategorized « မုန်တိုင်း WUTIP ယနေ့ညနေပိုင်း၌ အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာမည် INVEST-93W လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 20W ဖြစ်လာပြီ »
« မုန်တိုင်း WUTIP ယနေ့ညနေပိုင်း၌ အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာမည် INVEST-93W လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 20W ဖြစ်လာပြီ »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum